निगमन र LLC गठन FAQ
सहकारीको लागी कति लामो लाग्छ?
जोड्ने सबै भन्दा तेज तरीका के हो?
मैले कसरी सहकार्य गर्ने समय गति गर्न सक्छु?
मैले मेरो समावेशीकरण आदेश पछि के हुन्छ?
के म एक वकील को बिना शामिल गर्न सक्छु?
के शामिल गर्न को लागि मलाई EIN नम्बर चाहिन्छ?
यदि मलाई शामिल छ भने मलाई एक व्यावसायिक इजाजतपत्र चाहिन्छ?
के मेरो राज्यमा समावेश गर्न कुनै विशेष आवश्यकता छ?
के हो भने मेरो कम्पनीको नाम पहिले नै समावेश गरिएको छ?
के म सहभागिता पछि स्टक जारी गर्नु पर्छ?
मेरो समावेश पैकेजको साथ के हो?
कुन कागजातहरू समावेश गर्न दावी गरिएको छ?
के त्यहाँ आईआरएस कागजातहरू समावेश गर्दा फाइल गर्न छ?
के म एक चरणमा समावेश गर्न सक्छु?
समावेश गर्दा मलाई के सम्झना छ?
कर्पोरेट संरचना र समावेश, के मैले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छु?
कारावास कस्ता छन्?
यदि समावेश गरिएको छ भने, मलाई अझै DBA चाहिन्छ?
मलाई थप जानकारी कहाँ पाउन सक्छु?
मैले सहभागी भएपछि बैंक खाता खोल्न आवश्यक छ?
निगमका प्रकारहरू के हुन्?
एक निगमको कर कसरी गरिन्छ?
निगमहरूका लागि "दोहोरो करण" के हो?
कर्पोरेट बगलहरू के हुन्?
मैले कर्पोरेट स्टक कसरी जारी गरें?
मेरो निगमले कति वटा शेयरहरू गर्न सक्छन्?
"पर् मूल्य" र कर्पोरेट स्टक के हो?
के मलाई कर्पोरेट सभाहरू राख्नु पर्छ?
कर्पोरेट औपचारिकताहरू के हो?
मेरो निगमले EIN नम्बर कसरी पाउँछ?
निगमहरू कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ?
मेरो निगमले कतिजना अफिसहरू गर्न सक्छन्?
कम्पनीको निर्देशक बोर्ड को हुन्?
निगमका हानिहरू के हुन्?
सम्बद्धताका लेखहरू के हुन्?
एस निगम के हो?
कसले निगम र चलाउन सक्छ?
एक निगम चलाउन कति खर्च गर्छ?
व्यावसायिक निगमहरू के हो?
यसलाई कतिपय समावेश गर्न सकिन्छ?
जब तपाईं हाम्रो साथ एक निस्क्रिय सेवा आदेश गर्नुहुन्छ, हामी तपाईंको अर्डर उही दिनमा प्रशोधन गर्छौं। हाम्रो ग्राहक सेवा विभागले तपाईंको सबै जानकारी पुष्टि गर्दछ र यदि आवश्यक आवश्यक परिवर्तनहरू वा वस्तुहरू आवश्यक भएमा तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ। एकपटक यो प्रमाणिकरण पार भएपछि, यो कागजात तयारीको लागि हाम्रो कानूनी विभागमा जान्छ। तपाईं खरिद गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ गति फाइल, उही दिन, वा 24 घण्टा तपाईंको अर्डरको ग्यारेन्टी प्रकृया। तपाईंको कागजातहरू ड्राफ्ट गरिनेछ र तपाईले चुनेको समयको समयमा सही सचिव स्टेट शाखा कार्यालयमा पठाइनेछ। सामान्यतया यो समय अवधि3व्यापारिक दिन हो। एक पटक तपाईंको दस्तावेजहरू राज्य अफिसमा छन्, यो तपाईंको राज्यको प्रकृयाको समय हो। राज्यसँग, तपाईं मानक वा विस्तारित दाखिल छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। अनुमानित अवस्था दावी गर्ने समयको बारेमा तपाइँको प्रतिनिधिलाई सोध्नुहोस् (यी विषय परिवर्तन गर्न)। त्यसपछि कागजातहरू स्टेट अफिससँग रेकर्ड गरियो र कम्पनीहरू इन्टरनेटमा फर्केका छन्। यस समयमा तपाईंको अर्डर हाम्रो शिपिंग विभागद्वारा प्रशोधन गरिएको छ र तपाईंको अतिरिक्त कर्पोरेट किट र मुहर, आईआरएस कागजात तयारी र बैंक खाताहरू आदेश जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त उत्पादन वा सेवा समावेश गरिएको छ। तपाईले चयन गर्नुभएको सेवाहरूमा आधारित, तपाइँले प्राथमिक मेल वा रातभरको माध्यमबाट तपाइँको पूर्ण समावेशीकरण प्याकेज पाउनुहुनेछ।
आदेश प्रशोधन समय + राज्य प्रोसेसिंग समय + ढुवानी प्रक्रिया समय (1 दिन)
जब तपाईं कम्पनीहरू समावेश गर्नुभएको बेला तपाईं चयन गर्न सक्नुहुनेछ गति फाइल तपाईको अर्डर त्यहि दिन प्रसोधनको साथ, वा 24 घण्टा। यसको मतलब तपाईको कागजात तयार हुने र उस समय अवधि भित्र रेकर्डिङको लागि उपयुक्त राज्य कार्यालयमा पठाइएका ग्यारेन्टीहरू छन्। अपग्रेडहरू $ 150 मा सुरू हुन्छ र हाम्रो ग्राहक सेवा विभाग मार्फत उपलब्ध छन्। जब तपाइँ हाम्रो पूरा प्याकेज चयन गर्नुहुन्छ (अनुशंसित) हामी तपाईंको ढुवानी विकल्पहरू रातभर प्राथमिकता र राज्यमा प्राथमिकतामा स्तरवृद्धि गर्नेछौं। तपाईंको राज्य दाखिला राज्य प्रसोधनको साथमा तपाईलाई समय बचत गर्न उन्नतमा स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ। एक पटक दायर र प्राप्त गरे, तपाईंको कागजातहरू तैयार छन् र सिधै रातभर तपाईलाई पठाइन्छ। सामान्यतया, राज्य कार्यालयले समग्र समग्र प्रोसेसिंग समयको उपभोग गर्नेछ। कम्पनी समावेश सहित तयारी, ढुवानी र अर्डर प्रसोधनको लागि समय घटाउँदै, तपाई 10 व्यापारिक दिन सम्म बचत गर्न सक्नुहुनेछ। जोड्ने सबै भन्दा तेज तरीका एक साथ पूर्ण समावेश पैकेज हो गति फाइल अपग्रेड गर्नुहोस्।
तपाईंको निमन्त्रणा क्रममा समय बचत गर्न थुप्रै तरिकाहरू छन्। राज्य अफिसमा रातो डिलीवरी सेवा र तपाईंसँग तपाइँको कागजातहरूको ट्रान्जिट समय कम गर्न एक द्रुत तरिका हो। राज्य कार्यालयसँग तपाईंको अर्डरको म्याद गर्दा राज्य दाखिला हुने समय घटाउनेछ। खरिद गति फाइल अपग्रेड ग्यारेन्टी हुनेछ कि तपाईंको अर्डर प्रोसेस गरिएको छ र तपाईले चुनेको समय अवधि भित्र राज्य कार्यालयमा पठाइएको छ, त्यहि दिन वा 24 घण्टा, ग्यारेन्टी। हाम्रो पूर्ण प्याकेजले प्राथमिकता शिपिंग र विस्तारित राज्य दावी गर्दै समावेश गर्दछ।
जब तपाईं कम्पनी समावेश गरिएको छ भने, हामी तपाईंको अर्डर अनलाइन वा हाम्रो ग्राहक सेवा विभाग मार्फत। तपाईंको सबै जानकारी शुद्धता र पूर्णताको लागि प्रमाणित गरिएको छ र हाम्रो कानुनी विभागमा जान्छ। पहिलो नाम तपाईंले सहभागी गर्नुभएको छनोटले तपाईंको राज्यको कार्यालयको उपलब्धताको लागि जाँच गर्यो। यदि हामी उपलब्ध छैन भने
हो। कम्पनीहरू शामिल एक कानूनी कागजात तयारी सेवा हो जुन नयाँ व्यवसायिक संस्थाहरू, मुख्य रूपमा, कर्पोरेटहरू, सीमित दायित्वहरू र सीमित साझेदारीहरू, अरूको बीचमा समावेश गर्ने।
नहीं .तपाईं को जोडने देखि पहिले तपाईंलाई ईआईएन नम्बर को आवश्यकता छैन। केहि अवस्थाहरूमा तपाई एक अवस्थित ईिन नम्बर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो त्यहि व्यवसायको लागि हो र निस्क्रियताबाट प्राप्त हुन सक्दछ। शामिल कम्पनीहरू तपाईंको EIN अनुप्रयोग तयार गर्न, वा तपाईंको लागि आफ्नो EIN नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको संलग्न व्यवसायको लागि बैंक खाता खोल्न तपाईंलाई EIN नम्बर आवश्यक पर्दछ।
सम्भवतः। तपाईंले आफ्नो काउन्टी र / वा शहरसँग व्यवसायमा स्थानीय नियमहरूको जाँच गर्नुपर्छ। केही व्यवसायिक प्रकारहरू र स्थानीय सरकारहरूले तपाईंको सम्बद्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यापार इजाजतपत्र वा अतिरिक्त प्रमाणपत्रहरू वा अनुमतिहरू चाहिन्छ।
सम्भवतः। केहि राज्यहरूलाई प्रकाशन चाहिन्छ, जसको अर्थ अखबारमा छोटो सूचना तपाईंको व्यापारको समावेशलाई प्रचार गर्न आवश्यक छ। कम्पनीहरुले यो र तपाईंको सबै ग्राहकहरुको लागि तपाईंको राज्यमा कुनै विशेष आवश्यकताहरुलाई निलम्बित गर्दछ।
जब तपाईं एक सहकार्य सेवा को आदेश दिनुहुन्छ, तपाई एक इकाई नाम र पहिचानकर्ता को चयन गर्नेछन्। परिचयकर्ता तपाईंको नाम पछ्याउँछ र "कार्प", "कर्पोरेट", "इंक", "LLC", "सीमित देयता कम्पनी", आदि। सामान्यतया यदि तपाईंको पहिलो इकाई नाम र पहिचानकर्ता अनुपलब्ध छ भने, हामी प्रयोग गर्नेछौं तपाईंको पहिलो वैकल्पिक छनौट र तपाईंको राज्यसँग नाम उपलब्ध नभएसम्म जारी राख्नुहोस्। हाम्रो ग्राहक सेवा विभागले तपाईंलाई बनाइनु अघि तपाईंको निस्क्रिय आदेशमा कुनै पनि परिवर्तनहरूको पुष्टि गर्न कल गर्नेछ।
जारी गर्ने स्टक निगमहरूका साथ औपचारिकता हो। सबै अपरेटिङ औपचारिकताहरूसँग पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्नको लागि, जारी जारी स्टक एक आवश्यक प्रक्रिया हो। स्टक जारी गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन् र यो व्यक्ति, अन्य संस्था र निगमहरूमा जारी गर्न सकिन्छ। तपाईले आफ्नो वित्तीय योजनाकार वा कानूनी सल्लाहकारको साथ जारी गर्न सकिने स्टकमा जाँच गर्नु पर्दछ, अधिकृत शेयरहरूको मूल्य र उनीहरूको मान र तपाइँको कर परिदृश्यलाई कसरी असर गर्न सक्छ। कम्पनीहरु शामिल शामिल पूर्ण संकुल संग स्टक प्रमाणपत्रहरु को उनको सबै शामिल आदेश संग।
यहाँ एउटा टेबल हो जुन प्रत्येक प्याकेजमा समावेश छ:
पूरा प्याकेज आधारभूत प्याकेज स्टार्टर प्याकेज
दर्ता एजेन्सी सेवा।
रैपिड दाखिल सेवा - कागजातहरू पेश गरिएका छन्
रातभर वा हातले सरकारलाई दिइयो
मूल्य (समावेश गर्दैन राज्य शुल्क) $ 380 $ 280 $ 99
सरल रूपमा प्रपत्र जोड्नको लागि एक व्यवसाय इकाईलाई राज्य भित्रको रूपमा लिइनेछ जहाँ व्यापारको बहुमत गरिन्छ। यस अवस्थामा, केवल निविष्टिकरण (निगम) वा गठन (LLC वा एल.पी.) को लेखहरू दायर गरिएका छन् र तपाईंको राज्यको कार्यालयसँग रेकर्ड गरिएको समावेश गर्न आवश्यक छ। केहि अवस्थाहरूमा समावेशीकरणको अवस्था जहाँ छैन व्यवसायको बहुमत हो, जहाँ लेखहरू राज्यको समावेशीकरण र विदेश योग्यतासँग दावी गरिएको छ, जहाँ राज्य सञ्चालन भएको छ। विदेशी योग्यताका लागि फाईल गर्न, मौलिक लेखहरूको प्रमाणित प्रतिमा र राम्रो गणनाको प्रमाण प्रक्रिया प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ।
के त्यहाँ आईआरएस कागजातहरू समावेश गर्दा फाइल गर्न हो?
नहीं। आईआरएस को शामिल गर्न कुनै दस्तावेज को आवश्यकता छैन। यदि तपाईंले फरक कर स्थिति रोज्नुभयो भने, "सब अध्याय एस चुनाव" जस्तै तपाईंको आईआरएस फारम 2553 लाई नयाँ व्यवसायका लागि IRS सँग समय अवधि भित्र दायर गर्न आवश्यक छ। यी कर स्थिति परिवर्तनहरू तपाईंको वित्तीय योजनाकार वा लेखाकारसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ। कम्पनीहरु शामिल शामिल पूर्ण समाप्ति प्याकेज संग तपाईंको लागि पूर्ण कर फारम शामिल हो र तपाईं उन फाइल को चयन गर्न सक्छन् र आईआरएस संग आफ्नो कर स्थिति बदलन को लागी चुन सकते हो।
हो। एक उपभोक्ता स्टैंड बिन्दुबाट, एकपटक तपाईं कम्पनी समावेश भएको एकपटक, तपाईं आफ्नो अर्डरमा स्टेटस अपडेटहरू बाटोको प्रत्येक चरण प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईंको सम्पूर्ण कागजात प्याकेज एक डिलीवरीमा आइपुग्छ। त्यहाँ थुप्रै कागजातहरू तयार छन् र एजेन्सीहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि कागजातहरू छन्, कम्पनीहरूले तपाईंको लागि यो सबैलाई सङ्कलन गरे, त्यसैले हाम्रो ग्राहकहरू एक छिटो र सजिलो चरणमा समावेश छन्।
जब तपाईं आफ्नो निजेशन क्रम राख्नुहुन्छ, यो तपाईंको लेखापाल वा वित्तीय नियोजकलाई तपाईंको निर्णयको विवरण थाहा गर्न बुद्धिमानी छ ताकि कुनैपनि कर योजना परिवर्तन तपाईंको नयाँ व्यवसायको अवधारणामा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तपाईंको इकाई प्रकारको साथ तपाईंको राज्यको परिचालन औपचारिकताहरू बुझ्न र बुझ्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। सबै राज्यों को आवश्यकता हो, कानून द्वारा, कि निगमों कम से कम, एक वार्षिक आधार मा शेयरधारकों को बैठकहरु लाई पकड। यी सभाहरूको मिनेटहरू राखिनुपर्दछ, दायर गरिएको छैन, तर रेकर्ड र उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्दछ। प्रत्येक वर्ष, तपाईलाई राज्य कार्यालयको साथ जानकारीको बयान फाइल गर्न वा इकाई रेकर्ड, ठेगानाहरू, अधिकारीहरू, निर्देशकहरू, दर्ता एजेन्टहरू, आदिमा कुनै परिवर्तनहरू उल्लेख गर्दै फाइलहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक ठेगानामा एक ठेगाना राख्नुहोस् (एक निर्दिष्ट दर्ता गरिएको एजेन्ट ) तपाईंको राज्य कार्यालयको साथ राम्रो स्थितिमा रहन पनि आवश्यक छ। समय मा सही कर भुक्तानी अर्को महत्त्वपूर्ण विचार हो र तपाईंको एकाउन्टेंट संग संभाला हुनुपर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो नयाँ व्यवसायको साथ कुनै दण्ड पनि नदिनु हो।
हो। तपाई सँधै तपाईंको समावेश व्यवसायमा परिवर्तनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। केहि अवस्थामा, यो कानुनी दस्तावेजको कुरा हो, वा परिचालन सम्झौता परिवर्तनहरू (LLC), र अन्य क्रियाकलापहरू तपाईंको राज्य अफिसमा संशोधनको अनुच्छेद दावी गर्न आवश्यक पर्दछ, जस्तै कम्पनी नामको परिवर्तन, अधिकारीहरू र निर्देशकहरू थप्ने वा हटाउने , अधिकृत शेयरहरू परिवर्तन गर्नुहोस् वा तपाईंको स्टकको प्रति मूल्य (कर्पोरेटहरू)। कम्पनीहरू समावेश गरिएको तपाईंको 1 व्यापारिक दिन भित्र कुनै पनि कारणका लागि तपाइँको लेख फाइल गर्न सक्दछ।
Bylaws महत्त्वपूर्ण छन् किनभने तिनीहरू कसरी कम्पनी सञ्चालन गर्छन् भनेर निर्दिष्ट गर्छन्। यसले अधिकारीहरू वा प्रबन्धकहरू बीचको अधिकार र शक्ति वितरणलाई रूपान्तरण गर्छ। Bylaws राज्य कार्यालयको साथ दायर गरिएको छैन र तपाईले तिनीहरूलाई बनाउनु सरल र जटिल हुन सक्छ। इकाई प्रकार अलर्ट र LLC र LP सँग भिन्नता परिचालन सम्झौताको प्रयोग गर्दछ, जुन धेरै समान छन्। तपाईं आफ्नो कम्पनी चलाउन सजिलो बनाउन र साथसाथै पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ, यो कसरी चलिरहेको र बङ्गलाहरू मार्फत व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। कुन वित्तीय वर्ष, बैठकहरू कसरी आयोजित हुन्छन्, कसरी कति निर्देशकहरू र उनीहरूको योग्यता, तपाईंका बङ्गलाहरू संशोधन र कसरी उपयुक्त कर्पोरेट किताबहरू राख्ने।
सम्भवतः। जब यो खेलमा आउँछ जब तपाईं पैसा प्राप्त गर्नुहुन्छ, प्रायः भागको लागि। एक DBA (व्यवसाय गरिरहेको रूपमा) रेकर्ड गरिएको नाम मार्फत तपाईंको व्यवसायको पहिचान गर्ने एक तरिका हो, भले पनि तपाईंको समावेश गरिएको नाम भिन्न छ। उदाहरणका लागि यदि तपाइँको शामिल नाम हो भने क्यालिफोर्निया कम्प्युटर मरम्मत, Inc र तपाईं व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ www.WeFixYourPC.com, त्यसपछि तपाइँलाई भुक्तानी प्राप्त रकम प्राप्त गर्न एक DBA को आवश्यकता हुनेछ www.WeFixYourPC.com। मूलतः तपाईंसँग व्यवसायको लागि दुई रेकर्ड नामहरू छन्। तपाईं DBA एक निगम वा LLC सक्छ जस्तै तपाईं एक व्यक्ति हुनेछ।
समावेश गरिएको कम्पनीहरू इन्टरनेटमा सबैभन्दा नि: शुल्क जानकारी समावेश गर्नका लागि प्रदान गर्दछ। तपाईं यहाँ हाम्रो सेवाहरू र इकाई विशिष्ट जानकारी ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ:
निगम जानकारी LLC सूचना निगमन सेवा
एक व्यापारिक बैंक खाता खोल्नको लागी, तपाईंलाई आवरणको तपाइँको दायर गरिएको र रेकर्ड गरिएको लेखको आवश्यकता छ र तपाईंको आईआरएसबाट तपाईले जारी गरिएको फेडरल एमिसेलर पहिचान नम्बरको आवश्यकता पर्दछ। साथै कुनै प्रारम्भिक जम्मा रकम।
एसी निगम, अन्यथा एक मानक व्यापार निगमको रूपमा भनिन्छ धेरै प्रकारका छन्। यसबाट अलग रहन गैर-नाफा संस्थाहरू हुन् जुन पूर्णतया फरक कानुनी नियम र कर वर्गीकरण अन्तर्गत हुन्छ। जहाँसम्म मुनाफा निगमहरूको लागि सामान्य, त्यहाँ "सी", "एस" र व्यावसायिक निगम हो। पूर्वनिर्धारित रूपमा "निगम" एक "सी" निगम हो, यसलाई सी निगम भनिन्छ, किनभने यो आईआरएस कोडको उप-भाग सी अन्तर्गत कर लगाइएको छ। C कर्पोरेटहरूले अल्पसंख्यक रकम लिन सक्दछ जुन सबै प्रकारका कानूनी संस्थाहरू हुन सक्छन्। एस निगम साना व्यवसायका लागि सिर्जना गर्न थाल्नु थियो डबल कराधान र आईआरएस कोड, अध्याय "एस" अन्तर्गत आइपुगेको छ र शेयरधारकहरूको मात्रामा सीमाहरू र व्यक्तिको भन्दा अन्य कुनै पनि स्वामित्वमा राख्न सकिँदैन। व्यावसायिक निगमहरु अनिवार्य रूप देखि सी निगमहरु हो जो कि चिकित्सकहरु, दन्त चिकित्सकहरु र वकीलहरु को रूप मा पेशेवर सेवाहरु को प्रयोजनों सम्म सीमित छन्। यी प्रकारका कर्पोरेटहरू राज्यको कानुनमा बनाइएका छन् जसले आलोचना गर्दछ कि किस प्रकारका पेशेवरहरूले यो प्रकारको कानुनी इकाईलाई समावेश गरेको छ।
एसी निगम आईआरएस फारम 1120 को प्रयोग गरेर, कटौती पछि, सबै मुनाफा मा विशेष कर्पोरेट दरहरु को तहत अलग से टैक्स गरिएको छ। व्यापारको अन्य रूपहरू व्यापार संरचनाको मुनाफा र / वा हानिलाई उनीहरूको व्यक्तिगत कर रिपोर्टिङमा कर दायित्व लगाउने मालिकहरूलाई पास पार गर्न अनुमति दिन्छ। सी निगम एक कर योग्य संस्था हो।
सी निगमले कर भुक्तानी गरे पछि, कुनै पनि कर मुनाफा पछि लाभांशको रूपमा शेयरधारकहरूमा वितरित गर्न सकिन्छ वा व्यापारमा बायाँ भविष्यको लगानीको लागि। यसले व्यवसाय मालिकहरूको लागि डबल कराधानको कारण हुन सक्छ, जब निगमले व्यापारको मुनाफामा कर तिर्दछ र कुनै बाँकी मुनाफा शेयरधारकहरूलाई भुक्तानी गर्दछ जसले लाभांश फिर्तामा कर तिर्न दिन्छ। आईआरएस कोड उप अध्याय एस साना निगमहरूका लागि यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्दछ र इकाई साझेदारीको रूपमा वा "पासबाट" कर इकाईको रूपमा कर लगाउन अनुमति दिन्छ। एस कर्पोरेटहरूसँग हुन सक्छ र त्यहाँ कति साझेदारहरू छन् मा अधिक सीमाहरू छन्।
Bylaw निगम निगम। यो एक आन्तरिक कागजात हो जसले इकाईको परिचालन नीति निर्दिष्ट गर्दछ। सबै फारमहरू समावेश छन्, भित्री परिवर्तनहरू वा संशोधन कसरी भइरहेको छ। यसले शेयरधारकहरू, निर्देशकहरू र अधिकारियोंबाट शेयरधारकहरूको अधिकार, अधिकार र वितरणलाई रूपरेखा गर्नेछ। कर्पोरेट किला कुनै पनि राज्य वा संघीय कार्यालयसँग दायर गरिएको छैन।
केही राज्यहरू छन् कि कति निगमले निगमसँग हुन सक्छ र अन्यसँग शेयरहरूको रकम वा प्रत्येक अंशको मूल्यमा आधारित फ्रान्सीसीज कर नियमहरू छन्। तपाईले आफ्नो निगममा कति शेयर सहभागी हुन निर्णय गर्न तपाईंको राज्यमा तपाईंको कानूनी वा वित्तीय सल्लाहकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ। एक सामान्य दिशानिर्देशको रूपमा, सानो कर्पोरेटहरूको लागि एक वा एक मात्र दुई शेयरधारकहरूसँग जहाँ त्यहाँ लगानीकर्ता पूंजी प्राप्त गर्नमा इरादा छैन, कम मूल्य मानको साथ सानो मात्रामा अधिकृत शेयर सिफारिस गरिएको छ, जस्तै 1500 शेयर $ 1 मा। यो रकम निकै कम छ जुन कुनै बढेको फ्रैंचाइजिङ कर लागू नगर्नुहोस्।
मूल्य मान भनेको कर्पोरेट स्टकको प्रत्येक अंश हो वा यसको मूल्य हो। प्रत्येक राज्य यसको मान मान प्यारामिटरसँग फरक छ। केहि राज्यों को बराबर मूल्य मा एक प्रतिशत को अंश को अनुमति दि्छ, यसको मतलब तपाईंको शेयर $ .001 मा मूल्यवान हुन सक्छ, जबकि अन्य नहीं। केहि राज्यों शेयरहरु र निगम को बराबर मूल्य द्वारा मताधिकार गरेर कर गणना गर्दछ। तपाईले यस निर्णयलाई कानुनी वा वित्तीय व्यवसायको साथ गर्नु पर्छ जुन तपाईले आफ्नो निगमको गठन गर्नुभएको अवस्थामा काम गर्दछ। सामान्यतया कम साझेदारी रकम र सानो मूल्यको मान परिणामको लागी एउटै न्यूनतम फ्रैंचाइज कर परिणाम हुनेछ।
हो। राज्य व्यवस्थाको अनुसार, सबै निगमहरूमा कम्तिमा, वार्षिक आधारमा शेयरधारकहरूको बैठक हुनु पर्दछ। यी सभाहरू मीटिंग बैठकको रूपमा रेकर्ड गर्नुपर्छ र सबै निर्णयहरू कर्पोरेट रिजर्भेसनहरू मार्फत दस्तावेज गरिन्छन् र कर्पोरेट रेकर्ड पुस्तकमा राखिएको हुनुपर्छ।
कर्पोरेट औपचारिकताहरू महत्त्वपूर्ण छन् ताकि तपाईंको निगमले दायित्व सुरक्षामा सबैभन्दा बढी प्रदान गर्दछ। एक निगम गठन गर्न को मुख्य कारण तपाईंको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन अलग छ। यसो गर्दा, निगमलाई राम्रो तरिकाले स्थापना, संचालित र सुरक्षा को अधिकतम गर्न को लागी व्यवस्थित हुनु पर्छ। त्यहाँ धेरै "के हो र न है" हो जहाँ यो खेलमा आउँछ। एक उदाहरण व्यक्तिगत र व्यापार कोष commingling छ। जब यो हुन्छ, निगम अदालत द्वारा चुनौतीपूर्ण हुनु पर्छ, यो पाया जान सक्छ कि व्यापार को संचालनहरु यति धेरै नजीक व्यक्तिगत मामलाहरु संग कि कर्पोरेट ढाल को खारिज हुन सक्छ संग चलाइयो थियो। यी प्रकारका औपचारिकताहरूमा करहरू, सम्पत्ति र यसको प्रयोग, रिपोर्टिङ र व्यवस्थापन समावेश छ। अन्य प्रकारका परिचालन औपचारिकताहरू राज्य र संघीय कानून द्वारा प्रदान गरिएका छन्। तिनीहरु:
कर्पोरेट रेकर्ड राख्दै: कानून अनुसार, सबै 50 राज्यहरूको आवश्यकता छ कि एक निगमको शेयरधारकहरू कम्तीमा वार्षिक आधारमा बैठक र एक संगठनको समयमा वा निगमको निर्माण गर्ने हो। यी सभाहरूमा, केही मिनेटमा राख्नु पर्दछ र एक कर्पोरेट मिनेट बाईन्डरमा राख्नुहोस्, वा कर्पोरेट रेकर्ड बुक। यी सभाहरूमा, व्यापारिक वस्तुहरू छलफल गरिन्छ र निर्णयहरू बनाइएका छन् र बोर्डले निगमको अधिकारीहरूले व्यापार गर्ने दिनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कार्यहरू द्वारा अनुमोदन गर्दछ। यो औपचारिकता अक्सर अनदेखी गरिन्छ र खेलमा आउँदछ जब कर्पोरेट पर्दा चुनौतीपूर्ण छ। उचित बैठक मिनेट राखेर, प्रस्तावहरू दस्तावेज र निर्देशकहरूको बोर्ड द्वारा अनुमोदन गर्दै केवल निगमहरूको लागि आवश्यक औपचारिकता छ।
दर्ता एजेन्ट: हरेक समावेश गरिएको व्यवसाय इकाईलाई सार्वजनिक रेकर्डमा सर्भर प्रक्रियाको ठेगाना आवश्यक छ। यो पीओ बक्स हुन सक्दैन, राज्य भित्र एक भौतिक ठेगाना हुनुपर्दछ जुन निगम आधारित छ वा व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ र विदेशी योग्य छ। धेरै अवस्थामा, साना व्यवसाय मालिकहरू आफ्नो घर ठेगाना सार्वजनिक रेकर्डमा चाहँदैनन्, त्यसैले तिनीहरू एक निर्दिष्ट दर्ता एजेन्सी चयन गर्नुहोस् जसको ठेगाना सार्वजनिक रेकर्डमा देखा पर्दछ र यो औपचारिकतालाई सन्तुष्ट पार्छ।
सूचनाको वार्षिक विवरण: प्रत्येक दायर इकाई वा समावेश गरिएको व्यवसाय संरचनाले जानकारीको वार्षिक विवरण फाइल वा वार्षिक रिपोर्ट फाइल गर्नुपर्छ। यसले राज्य कार्यालयको व्यापारिक जानकारीको कुनै पनि परिवर्तनलाई बताउँछ, जस्तै ठेगानाहरू, अफिसरहरूको निर्देशक, निर्देशकहरू र शेयरधारकहरू, आदि। यो सामान्यतया एक नामावली शुल्क समावेश गर्दछ र इलेक्ट्रोनिक रूपमा प्रायः राज्यको वेबसाइटहरूमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
भुक्तानी गरेर: निस्सन्देह, प्रत्येक निगमले दुवै संघीय र फ्रान्सेली सरकारहरू समय र प्रति वर्गीकरण अनुसार वर्गीकरण अनुसार कर भुक्तानी गर्नुपर्छ।
व्यापार बैंक खाता खोल्नको लागि, र EIN नम्बर आवश्यक छ। आईआरएसबाट तपाईंको नम्बर प्राप्त गर्न, एक फारम पूरा हुनुपर्छ, साइन इन र पठाइयो। यसमा जब फारम पूरा गर्नुहुँदा यो नयाँ व्यवसाय हो भने प्रक्रिया सरल छ। यदि तपाइँसँग पहिले नै ईएनएन नम्बर समावेश गर्नु अघि, त्यसपछि केहि थप जानकारी आवश्यकताहरू छन्। तपाईं हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंको लागि आवेदन गर्न सक्छौं। शामिल कम्पनीहरू तपाईंको EIN फारम तयार गर्न वा तपाईंको लागि आफ्नो EIN नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यो सजिलो छ!
कर्पोरेटहरू संगठनात्मक ढाँचा छन्। निगम, वा शेयरधारकहरूको मालिकहरू, कर्पोरेट प्रबन्धन निरीक्षण गर्न निर्देशकहरूको बोर्ड छनौंट गर्नुहोस्। निगमको दिनको क्रियाकलापको दिन दिन कर्पोरेट अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हो, जुन निर्देशक बोर्ड द्वारा चयन गरिन्छ।
सामान्यतया निगममा4प्राथमिक अधिकारी पदहरू छन्, ती हुन्: राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, खजाना र सचिव। कुनैपनि अवस्थामा कर्पोरेट ढाँचा धेरै प्रकारको कर्पोरेट अधिकारीहरू समावेश गर्न को लागी स्वीकृत गर्न सकिन्छ।
निर्देशकको बोर्ड निगमको शेयरधारकहरु द्वारा चयन गरिएको एकत्रित निकाय हो। डाइरेक्टरहरूको बोर्ड निगमको प्रबन्ध र नीतिहरूको निरीक्षण गर्दछ, अर्थ उनीहरूले अधिकारी छनौट गर्छन् र उनीहरूको निर्णयहरू अनुमोदन गर्छन्। निर्देशकहरु या एक न्यूनतम राशि को लागि एक आवश्यकता छैन, यो सामान्यतया एक ठूलो कर्पोरेट संरचना हो।
जब तपाईं त्यहाँ सामेल हुनुहुने थुप्रै सञ्चालन औपचारिकताहरू छन् जुन। व्यापारलाई आवश्यक छ दुवै कार्य र संघीय कानुन द्वारा कार्यहरू। यसमा पेपर कार्य, रिपोर्टिंग र वर्ष भरमा नामांकन खर्चहरू समावेश गर्दछ। प्राथमिक हानि औपचारिकताहरू समावेश छन्, तथापि यी दायित्वहरू सुरक्षा र फाइदाहरू धेरै टाढा छन्।
निगमनका लेखहरू वास्तविक कागजात हुन् जुन दायर गरिएका छन् र स्टेट शाखा कार्यालयको सचिवसँग रेकर्ड गरिएको छ। यो तपाईंको निगमको "जन्म प्रमाणपत्र" हो र यो एक कानूनी कागजात हो।
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसले निगमलाई साझेदारीको रूपमा, "पास पार" कर इकाईको रूपमा कर लगाउन अनुमति दिन्छ जहाँ लाभ र हानि शेयरधारकहरू व्यक्तिगत कर रिटर्नमा रेकर्ड गरिएको छ।
कुनै पनि युएसए 18 भन्दा बढी निवासी निवासी हुन सक्छ। देश र निगमको प्रकारमा निर्भर गर्न गैर अमेरिकी निवासीहरूको लागि अन्य मापदण्डहरू छन्।
सामान्य रूपमा प्राथमिक परिचालन औपचारिकताहरु जो खर्च समावेश गर्न सक्छन् एक दर्ता एजेन्सी कार्यालय को बनाए राख्छ - कम्पनीहरु Incorporated प्रस्ताव मुफ्त 50 राज्यों मा सबै शामिल संग सबै साल को लागि नि: शुल्क दर्ता एजेन्ट प्रतिनिधित्व। तपाईंको राज्यसँग दायर गरिएको जानकारीको वार्षिक विवरण लगभग $ 15 देखि $ 55 खर्च हुनेछ, तपाईंको राज्यमा निर्भर गर्दछ र इलेक्ट्रनिक रूपमा दायर गर्न सकिन्छ। एक कर्पोरेट रेकर्ड किताब वा वार्षिक बैठक मिनेट राख्दै निगमको सचिवले कुनै पनि लागतमा गर्न सक्दछ।
निस्क्रिय जानकारी LLC सूचना निगमन सेवा
व्यावसायिक निगमहरू मानक सी निगमको रूपमा दायर गरिएका छन् र एस निगमको स्थिति चयन गर्न छनौट गर्न सक्छन्। प्राथमिक भिन्नता व्यवसायको प्रकार हो र कुन व्यावसायिक सेवा गर्न सकिन्छ वा एक व्यावसायिक निगम हुन सक्छ। सामान्यतया, डाक्टरहरू, दन्त चिकित्सकहरू र वकीलहरूले व्यावसायिक निगमहरू बनाउनेछन्।